Homeसमाचारइन्डियन आर्मी श्रीमानलाइ छोडेर भागेकी श्रीमती काठमाडौंमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन्
February 2, 2021 admin समाचार 5006
तनहुका रा’हुल गुरुगं इन्डियन लाहुरे र सानी छोरीलाई छो’डेर हिडेकी उनकी श्रीमतीको जि’वनमा फेरी अर्को मोड आएको छ । उनी श्रीमानको घरवाट हराएको एक महिना पछि काठमाडौको होट’लमा अर्का एक पुरुषसंग फेला परेकी थिइन् । अहिले उनी पछुतोको आँशु झारेकी छन् । उनले आफु ठूलो सं’कटवाट जोगिएको भनेकी छन् ।
उनले यसरी आफ्नो खो’जी गरेर फेला नपारेको भए आफु यो संसारमै रहन्थीन होला उनले भनिन् । राहुलको श्रीमती जनकपु’रका नारायण यादवसंग काठमाडौमा भेटिएकी थिइन् । नारायणसंग सामाजिक सञ्जाल मार्फत कु’राकानी भएको बताइन् । उनले नारायणले आफुलाई निकै सम्मान दिएर बोल्ने भएकाले उसको ब्यव’हारवाट प्रभावित भएको बताएकी छन् ।
नारायणले कुरा’कानी हुँदै जाँदा प्रेम बसेको बताइन् । नारायणले आफुलाई अवि’वाहित हो भनेर भनेका थिए । आफ्नो परिवारमा एक जना भाइ वाहेक कोही छैन भनेका थिए । उसको कुरा र ब्यवहारमा आफु लठ्ठ परेको बताइन् । नारायणले बोलाएकै कार’ण आफु भेट्न काठमाडौ आएको बताइन् ।
भिडियो’सार्वजनिक भएपछि राहुलसंग विवाह गर्छु भनेर कैयौं युवतीको फोन आएको कुरा युट्युवरले सुना’उँदा स्मीता निकै भावुक भएकी छन् ।आफ्नो सानी छोरीलाई विद्यालय छोड्न भन्दै हिडेकी थिइन् । उनी त्यस पछि घर फर्कि’इनन् । उनी उतैवाट हरा’इन् । तर अहिले केही समय पछि उनको श्रीमती स्मीता जन’कपुरको नारायण यादवसंग काठमाडौको गौशाला स्थित एक होटलमा करिब एक महिना देखि बस्दै आएको प’त्ता लागेको छ । ्
आफ्नो घर जन:कपुर भएको बताउने नारायणले आफ्नो परिवारमा कोही नभएको बताएका छन् । राहुलको परिवारका सद’स्यले स्मीतालाई होटलमा नारायणसंग फेला पारेका हुन् । स्मीताले आफु आफ्नै मर्जीले नारायणसंग आएको बताएकी छन् । उनले आफु जागिर’को शिलशिलामा आएको बताएकी छन् ।
स्मीता हराए’पछि उनको माइतीले आफ्नो छोरीलाई गाय’ब बनाएको आरोप राहुलको परिवारलाई लगा’एका थिए । स्मीताले आफुसंग भएको मोवाइल र सुन आफैले बेचेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो इच्छाले नारायणको साथमा आएको भन्दै राहुलको परिवारसंग नडरा’उने पनि बताइदिइन् ।
काठमाडौ को होटलमा स्मीता फेला परेपछि राहुलको परिवारले भिडियो कल मार्फत स्मीताको माइतीलाई त्यसबारे जानका’री दिएका छन् ।तर स्मीताले भने आफ्नो दिदीहरुको सम्पर्कमा रहेको बताइन् । उनले एक दिन अघि आफ्नो दिदीलाई आफुले आफ्नो जिन्दगीको निर्ण’य गरेको भनेर जानका’री दिएको पनि बताइदिइन् । – इताजा खबरबाट
यो पनि : वि’देशबाट आएका श्रीमानले कमाएको पैसा खोजेपछी घर बाट हिडेकी श्रीमती को श’ व नारायणी नदीमा भेटियो, श्रीमान पुगे थु नामा (भिडियो) चितवनमा फेरी एक पट’क अर्को घटना घटेको छ । जुन घटना यतिबेला हाम्रो समाजमा प्राय घटि रहेकै पाउँछौं । यो वैदेशिक रोजगारीको शिल’शिलामा श्रीमान विदेश गएको र श्रीमानले कमाएको पैसालाई नेपालमा बसेकी श्रीमतीले हि’नामि’ना गरेको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा धेरै घ’टनाहरु घटिरहेका छन् ।
योतीनै घ’टना मध्यको एक हो । बाक्ष्लुंग घर भएका कुल प्रसाद उपाध्याय पौडेलकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले श्रीमानको माटो रकम हि’नामि’ना गरिदिएपछि श्रीमानले आफ्ना कुरा मिडि’यामा राखेका थिए। आफ्नै श्री’मतीले आफ्नै कमाई खाँदा पनि कसरी हि’नामि’ना भयो भनेर आ’रोप लगाउन सकेको होला भन्ने प्रश्न त छंदै छ । साथै उनको श्रीमतीको लुगा र चप्पल जब नाराय’णी नदीमा भेटियो तब भने घटनाले अर्को मोड लियो ।
श्रीमानकुल प्रसा’दको भनाई अनुसार उनले विदेशमा कमाएको ५ लाख रकमलाई श्रीमतीले हि’नामि’ना पारेकी छन् । के श्रीमानको कमाई देखाउनु पर्छ भनेर होला त ? उनको श्रीमतीले नारायणी नदीको तिरमा आफ्नो लुगा र चप्पल फ्याँ’केर श्रीमा’नलाई भ्रममा पार्न खोजेको भन्ने समाचा’र यो भन्दा अगाडी बाहि’रिएका थिए ।
नायिका स्वेता खड्काबारे नराम्रो बोलेपछि सुस्मा कार्कीले धु’लाई भेटिन्, अनि धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पु’गिन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
March 27, 2021 admin समाचार 2579
April 23, 2021 admin समाचार 2334
April 15, 2021 admin समाचार 2546
बलिउडपछि साउथ फिल्म इ’न्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो। यहाँ काम गर्ने अभिनेत्रीको लो’कप्रियता निकै रहेको छ। साउथ इन्डि’यन फिल्म पुरा भारतमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ ।बलिउडपछि साउथ
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (214630)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206317)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (205970)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (204984)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (203757)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203001)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201251)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201080)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (193432)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170197)